नेताहरुले सहिदले गरेको बलिदानबाट सिकेनन् केहि , सिक्न जाने पो त - A complete Nepali news portal based on news & views
२२ पुस २०७६, मंगलवार २१:२० January 7, 2020 Buddha Sharan
पौष २२ ,काठमाडौँ ।
बाल साहित्य रचना भन्दा छुट्टै यो पटक पाठकमाझ अग्रज सहिद दशरथ चन्द ,गंगालाल ,शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्तको पुस्तक प्रकाशनमा ल्याकाछौ । अन्तीम धर्मभक्तको पुस्तक शायद अर्को सप्ताह पछि सम्ममा छपाई सकिन्छ होला । सहिद आफै बोलेको यो पुस्तकमा उहाहरुकाे बारेमा म लगतेत मेरो सहयोगी निकै मेहनत गरेका छन् । संछिप्तमा बाल साहित्यकारको भाषामा भन्नु पर्दा बालबालिका प्रति आम बाबुको सेवा जस्तै मेरो बाल साहित्य यात्रा जसरी कुनै आमाबुबा आफ्ना बालबालिका को सेवा गर्छ । समाज आफै आम बुबा जस्तो हुने हुदा कोइ न कसैले त बालबालिकालाइ समाज सिकाउने जरुरि हुन्छ । बालबालिकामा जन्मै बात चेतना त पक्कै हुदैन त्यसैले बाल मनो बैज्ञान विकास गर्न बाल साहित्यले आफ्नै भूमिका निभाउने गर्छ ।
बाल साहित्यकार निकै कम छ किन ?
यो पुस्तकमा प्रजान्त्रका लागि ज्यानको आहुति दिने सहिदका बारेमा कसरि ब्याख्या गर्नु भएको छ ।
यो बालकोशेलीले योजना बनाएर सबै मिलेर प्रकाशन गर्न जमल्को गरेका हौ । सहिद आफैले आफ्नो जीवनी बताइरहेका धेरै कुरा समाविष्ट छ । अहीले हामी संघीय लोकतन्त्र छौ त्योबेला समान्त बादी ब्यबस्थामा लोकतन्त्रकालागी जीवन बलिदान दिने उहाहरु लोकतन्त्रका बाजे बराजु हुन् । तर मैले अन्य सहिद भन्दा उहाहरुलाई उच्च स्थानमा महसुस गर्छु । हामीले लोकतन्त्रलाइ बलियो बनाउने हो भने प्रथम उनीहरुका विचार आदर्शलाइ प्रचार प्रसार गर्ने पर्छ ।
अहीले हामी अल्मलिएका छौ । भन्न खोज्नु भएको हो की ?
पक्कै पनि के हामिले हाम्रा तीन,चार पुस्ताका नाम थाहा पाएका छौ र ? अहिलेका पिढी पुर्खाका सम्पत्ति खोजि खोजि कसरि प्राप्त गर्ने भन्ने बढी चासो गर्छन् सम्पत्तिमा लोभ गर्छन् । मानिसले यो सम्पत्ति जोड्ने पुर्खाको नाम र योगदानको ख्याल दरेको पाईदैन । हालक राजनैतिक नेताहरुले लोकतन्त्रका लागि लडेर जीवननै त्याग गरेका यस्ता सहिदलाइ सम्झेर अनुशरण गर्न जाने पो त तर खै त सम्झेको जसरी हामिले हाम्रा बजे बराजुलाइ बिर्सेका छौ ।
बालसाहित्यकार शान्तदास मानन्धर संग गरिएको कुराकानी –
साहित्यकार मानन्धर बलाकोसेली पत्रिकाका प्रबन्द सम्पादकको रुपमा बि स २०४९ बात प्रकासित , ५ दशक भन्दा बदी निरन्तर साहित्य क्षेत्रमा योगदान गरे बापत जगम्बा श्री तथा प्रवल जनसेवा पदक स्रो बाट सम्मानीत
बुटवलस्थित नवीन औद्योगिक मावि ४४ औं वर्षमा
चार दशक जनप्रतिनिधिको रुपमा सेवा गरेका चन्द्रानन्द नेवा:लाइ गरे नागरिक सम्मान